फिक्स सिस्टम रिस्टोर विन्डोज १० मा सफलतापूर्वक पूर्ण भएन - विन्डोज १०
फिक्स सिस्टम रिस्टोर विन्डोज १० मा सफलतापूर्वक पूर्ण भएन
विन्डोज प्रणाली पुनर्स्थापना एक धेरै उपयोगी फिचर हो जुन महत्वपूर्ण अपरेसनहरू जस्तै अपडेटहरू वा सफ्टवेयर स्थापना हुने ठाउँ लिनु अघि निश्चित फाईलहरू र सूचनाहरूको स्न्यापशट सिर्जना गर्दछ। यदि केहि गतिविधि पछि विन्डोजले दुर्व्यवहार शुरू गरे पछि तपाइँ तपाइँको प्रणालीलाई पछिल्लो काम गर्ने स्थितिमा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ प्रदर्शन प्रणाली बहाल । तर कहिलेकाँही प्रणाली रिस्टोर एक त्रुटि सन्देशको साथ असफल ' प्रणाली पुनर्स्थापना सफलतापूर्वक पूरा भएन '। अघिल्लो बहाली बिन्दुमा फर्कन प्रणाली पुन: भण्डारण प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा प्रयोगकर्ताहरूको संख्याले रिपोर्ट गर्दछ। प्रक्रिया त्रुटि साथ असफल भयो सिस्टम पुनर्स्थापना सफलतापूर्वक पूर्ण भएन। तपाईको कम्प्युटरको प्रणाली फाईल र सेटिंग्स परिवर्तन गरिएको थिएन। यहाँ पूरा सन्देश छ
सामग्रीहरू देखाउनु १ प्रणाली पुनर्स्थापना विफल विन्डोज १० १.१ एन्टीवायरस अनुप्रयोगको स्थापना हटाउनुहोस् १.२ सेफ मोडमा प्रणाली रिस्टोर गर्नुहोस् १.3 भोल्यूम छाया प्रतिलिपि सेवा चलिरहेको छ १.3.१ मर्मत भ्रष्ट प्रणाली फाईलहरू १.3.२ त्रुटिहरूको लागि हार्ड डिस्क जाँच गर्नुहोस्
प्रणाली पुनर्स्थापना सफलतापूर्वक पूरा भएन। तपाईको कम्प्युटरको प्रणाली फाईल र सेटिंग्स परिवर्तन गरिएको थिएन।
प्रणाली पुनर्स्थापनाको क्रममा एक अनिर्दिष्ट त्रुटि देखा पर्‍यो। (०x80070005)
प्रणाली पुनर्स्थापना विफल विन्डोज १०
यो समस्या देखा पर्‍यो किनभने केही फाईलहरू ठीकसँग प्रतिस्थापन गरिएको छैन यदि पुनर्स्थापना प्रक्रियाको क्रममा एक फाईल द्वन्द्व देखा पर्‍यो भने। यो एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको कारण हुन सक्छ प्रणाली पुनर्स्थापनामा हस्तक्षेप गर्दै। प्रणाली संरक्षण सेवामा त्रुटि जुन प्रणाली पुनर्स्थापनालाई पूर्ण गर्नबाट रोक्दछ, डिस्क लेख्ने त्रुटिहरू वा यो बिग्रिएको वा विन्डोज प्रणाली फाईलहरू हराउन सक्छ। कारण जेसुकै होस्, यहाँ प्रणाली पुनर्स्थापना समाधानका लागि केहि प्रभावकारी समाधानहरू सफलतापूर्वक पूर्ण भएनन् प्रणाली पुनर्स्थापनाको क्रममा एक अनिर्दिष्ट त्रुटि देखा पर्‍यो त्रुटि 0x80070005।
एन्टीवायरस अनुप्रयोगको स्थापना हटाउनुहोस्
त्रुटि संवादद्वारा सुझाव दिए अनुसार, एन्टिभाइरस समस्याको कारण कम्प्युटरमा चल्दैछ। हामी अस्थायी रूपमा एन्टिभाइरस प्रोग्राम असक्षम पार्ने सल्लाह दिन्छौं जुन तपाईं प्रणालीमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अस्थापना गर्दासमेत स्थितिमा कुनै फरक भएन।
तपाईं यो फारम नियन्त्रण प्यानल गर्न सक्नुहुन्छ
कार्यक्रम र सुविधाहरू
स्थापित एन्टिभाइरस अनुप्रयोग चयन गर्नुहोस्
स्थापना रद्द गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
सेफ मोडमा प्रणाली रिस्टोर गर्नुहोस्
साथै, बुट इन सुरक्षित मोड र प्रणाली बहाल प्रदर्शन, जाँच गर्नुहोस् यदि यसले मद्दत गर्दछ भने।
सुरक्षित मोडको साथ प्रयास गर्नुहोस्।
डेस्कटपबाट प्रेस विन्डोज झण्डा कुञ्जी र R भेला गर्न।
प्रकार msconfig र ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
यसले प्रणाली कन्फिगरेसन उपयोगिता खोल्छ।
बुट ट्याब चयन गर्नुहोस् र सुरक्षित बुट जाँच गर्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस् लागू गर्नुहोस् र हुन्छ मा क्लिक गर्नुहोस् अब कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
यसले कम्प्युटरलाई सुरक्षित मोडमा पुनःबुट गर्दछ र जाँच गर्दछ प्रणाली पुनःबहाली मद्दत गर्दछ कि।
वैकल्पिक रूपमा, सफ्ट बुट प्रदर्शन गर्नुहोस्, विन्डोज सुरु गर्न ड्राइभर र स्टार्टअप प्रोग्रामहरूको न्यूनतम सेट प्रयोग गरेर। यसले सफ्टवेयर संघर्ष हटाउन मद्दत गर्दछ जुन तपाईं प्रोग्राम स्थापना गर्नुहुन्छ वा अपडेट हुँदा वा विन्डोजमा प्रोग्राम चलाउनुहुँदा हुन्छ। तपाइँले समस्या निवारण गर्न वा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि विवादको कारणले समस्याको कारण ए सफा बुट ।
भोल्यूम छाया प्रतिलिपि सेवा चलिरहेको छ
यदि विन्डोजले भोल्युम छाया प्रतिलिपि सेवामा त्रुटि प्राप्त गर्दछ वा यदि यो सेवा सुरू गरिएको छैन भने तपाईंले यो प्रणाली पुनःबहाली गर्न असफल त्रुटि सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ यो सेवा चलिरहेको छ। यदि यो सेवा सुरू गरिएको छैन भने तपाईं मैन्युअल्ली तलका चरणहरू अनुसरण गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
विन्डोज + R टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् Services.msc र ठीक छ
तल स्क्रोल गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् भोल्यूम छाया प्रतिलिपि सेवा
भोल्यूम छाया प्रतिलिपि सेवामा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र पुन: सुरू चयन गर्नुहोस्।
साथै, जाँच गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि भोल्युम छाया प्रतिलिपि सेवा स्टार्टअप प्रकार स्वचालित रूपमा सेट गरिएको छ
अब विन्डोज सेवा विन्डो बन्द गर्नुहोस् र प्रणाली रिस्टोर जाँच गर्नुहोस् यस समयमा यो सफलतापूर्वक पूर्ण भयो।
मर्मत भ्रष्ट प्रणाली फाईलहरू
धेरै जसो बिग्रेको प्रणाली फाईलहरूले बिभिन्न त्रुटिहरू निम्त्याउँदछ र प्रणालीलाई पुन: भण्डारण गर्न सक्छ यो बिग्रिएको / हराइरहेको प्रणाली फाईलहरूको कारण विफल हुन सक्छ। हराएको प्रणाली फाईलहरू फेला पार्न र पुनर्स्थापना गर्न विन्डोज एसएफसी युटिलिटी चलाउनुहोस् एउटा भ्रष्ट प्रणाली फाइल समस्या समाधान गर्न राम्रो समाधान हो।
कमाण्ड प्रम्प्टको लागि खोजी गर्नुहोस्, दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र प्रशासकको रूपमा चलाउन चयन गर्नुहोस्,
आदेश टाइप गर्नुहोस् एसएफसी / स्क्यानः र इन्टर कुञ्जी थिच्नुहोस्।
यो एक भ्रष्ट फाइल हराएको को लागी प्रणाली जाँच गर्नेछ यदि कुनै sfc उपयोगिता सही संग तिनीहरूलाई बहाल भने।
१००% पर्खनुहोस् जब सम्म स्क्यानि process प्रक्रिया पूरा हुँदैन र विन्डोज पुनःस्टार्ट गर्दछ।
अब प्रणाली बहाल पुन: जाँच यस समयमा तपाईं सफल हुनुहोस्।
त्रुटिहरूको लागि हार्ड डिस्क जाँच गर्नुहोस्
साथै, केहि समय डिस्क त्रुटिहरूले प्रणाली पुनर्स्थापना / अपग्रेड गर्न वा कुनै पनि कार्यक्रम स्थापना गर्नबाट रोक्न सक्दछ। यदि माथिका विधिहरूले काम गरेनन् भने तपाईंलेaगर्नु पर्छ chkdsk त्रुटिका लागि प्रणाली ड्राइभ स्क्यान गर्न दिनुहोस्।
यो फेरि प्रशासक को रूप मा ओपन कमाण्ड प्रम्प्ट को लागी आदेश टाइप गर्नुहोस् chkdsk c: /f/ r कमाण्ड र प्रेस कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सुझावहरू: CHKDSK चेक डिस्कको छोटो हो, सी: ड्राईव पत्र हो जुन तपाईं जाँच गर्न चाहानुहुन्छ, / F मतलब डिस्क त्रुटिहरू ठीक गर्नुहोस् र / आर खराब क्षेत्रहरूबाट जानकारी पुनःप्राप्तिका लागि खडा हुन्छ।
जब यो प्रोम्प्ट हुन्छ 'के तपाइँ यस भोल्युम जाँच गर्न चाहानुहुन्छ अर्को चोटि प्रणाली पुनः सुरु हुने समय जाँच गर्न? (Y / N) '। हो कि प्रश्नको जवाफ तपाईंको कुञ्जीपाटीमा Y कुञ्जी थिच्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्। तपाईको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
पुन: सुरु गरेपछि, डिस्क जाँच अपरेशन शुरू हुन्छ। विन्डोज त्रुटिहरूको लागि तपाइँको डिस्क जाँच नगरेसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यदि तपाईंले हार्ड डिस्क र मेमोरी जाँच गरेर त्रुटि फेला पार्नुभयो भने, तपाईंले ती समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। त्यहाँ धेरै प्रणाली अनुकूलन उपकरणहरू अनलाइन उपलब्ध छन्। तपाईं कसैलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं त्यो प्रोग्राम विश्वास गर्नुहुन्छ भने।
के यी समाधानहरूले समाधान गर्न मद्दत गर्‍यो प्रणाली पुनर्स्थापना सफलतापूर्वक विन्डोज १० पूरा भएन ? हामीलाई तल टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्, यो पनि पढ्नुहोस्:
समाधान गरिएको: कन्फिगर गरिएको प्रोक्सी सर्भरले विन्डोज १० लाई प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन
अप्रत्याशित स्टोर अपवाद निलो स्क्रिन त्रुटि विन्डोज १० लाई ठीक गर्नुहोस्
विन्डोज अपडेट अडियो डाउनलोड विन्डोज १० अक्टुबर २०१ update अपडेट
जब बाह्य माउस जडान हुन्छ तब टचप्याड असक्षम गर्नुहोस्
माइक्रोसफ्ट स्टोर विन्डोज १० लाई सक्षम गर्नुहोस्
विन्डोज १० वाइफाइ आइकन हराइरहेको छ
विन्डोज १० ल्यापटप पुन: सुरु गरिरहन्छ
साथीहरूबाट लुकाउने गतिविधि गतिविधि स्टीम
विन्डोज १० क्रोम कुनै आवाज छैन
प्रणाली सेवा अपवाद विन्डोज 8.१